कलियुगका कुरा: कहाँ हराए ट्राफिकको चश्मा
कहाँ हराए ट्राफिकको चश्मा
काठमाडौंका ट्राफिक प्रहरीहरु दुई महिना जति अगाडि अष्ट्रेलियालीले दिएको चस्मा लगाएर सडकमा उभिन्थे। अष्ट्रेलियाले नेपाली ट्राफिक मार्फत त्यो चस्मा हितकारी छ कि छैन भनेर प्रयोग गर्न खोजेकाले आँखामा हानी पुग्या भएर ट्राफिक प्रहरीले त्यो लाउन छाडेका हुन् कि, ट्राफिक प्रहरीले ती चस्मा आफ्ना साथी भाइ, साला सालीलाई बाँडे कि के भो कुन्नि आजभोलि एक दुई जना मात्र आक्कल झुक्कल त्यो चस्मा लगाएका ट्राफिक प्रहरी देख्छु बाटामा।
एउटा जिज्ञासा लाग्या कुरा नि...
यसअगाडि र अहिले पनि बेलाबेलामा विदेशीहरुले नेपालीमाथि प्रयोग गरेका उदाहरण छन्। एकपटक त अमेरिकाले नेपाली सेनाका जवानहरुलाई लगाएर एउटा कुनै औषधि सुईको प्रयोग गरेको थियो।
तल अनिल नेपालको कमेन्ट पनि राम्रो छ।
'गरिब हुनुको सजाय धेरै खाले हुन्छन, त्यस मध्ये 'guinea pig ' हुनु पनि एक हो ! हामीमा चस्मा मात्र हैन, औसधि, लुगा, खाद्यान्न, तेल, खेलौना, धुलो दुध, furniture, TV को स्क्रीन, औजार, alcohol, soft drinks जस्ता धेरै कुराहरुको टेस्ट गरिन्छ ! मानब स्वस्थ मा तेस्को आसर केहि छ कि छैन भनेर ! कति नेपालीहरु त पैसाको लागि human-lab मै गयर सुतिदियको पनि देखेको छु, जे जे टेस्ट गर्छौ गर भनेर ! ..... एसको बिरोध गर्न पहिले हामी उद्यमसिल, मेहेनती हुनुपर्छ, जुन हामी सक्दैनौ .....'
Keshab Ghimire, Ratnawali Sharma, Sansar K.C. and 83 others like this.
Robin Bhujel sayed aaba dashain ma shasurali jada lagauna huncha vanera po hoki... :P
October3at 2:10pm via mobile · Like · 1
Binod Neupane नहेर्ने कुरो पनि देख्छ रे , त्यो चस्मा ले ?
Madan Mani Adhikary रिंगाउने कि के समस्या देखियो रे। टेष्ट गर्न द्या रच के हो?
October3at 2:14pm · Like
विष्णु प्याकुरेल Sabai ra sadhain test (experiment) mai adkeko chha jammai kuro.
October3at 2:14pm via mobile · Like
ख।सम। तो चशम।ले नोट कतिको हो भनेर छुट।उन ग।रो भयो रे॥
October3at 2:18pm via mobile · Like · 5
Harihar Kafle design ramro navako ho ki
October3at 3:49pm · Like
Anil Nepal · Friends with Subarna Humagai and 62 others
गरिब हुनुको सजाय धेरै खाले हुन्छन, त्यस मध्ये 'guinea pig ' हुनु पनि एक हो ! हामीमा चस्मा मात्र हैन, औसधि, लुगा, खाद्यान्न, तेल, खेलौना, धुलो दुध, furniture, TV को स्क्रीन, औजार, alcohol, soft drinks जस्ता धेरै कुराहरुको टेस्ट गरिन्छ ! मानब स्वस्थ मा तेस्को आसर केहि छ कि छैन भनेर ! कति नेपालीहरु त पैसाको लागि human-lab मै गयर सुतिदियको पनि देखेको छु, जे जे टेस्ट गर्छौ गर भनेर ! ..... एसको बिरोध गर्न पहिले हामी उद्यमसिल, मेहेनती हुनुपर्छ, जुन हामी सक्दैनौ .....
October4at 11:47am · Like